မက်ဆီကို လီဗာပူးလ်အသင်းအတွက် ခေါ်ယူရန် စိတ်ဝင်စားတယ်လို့ ဝန်ခံပြောကြားလိုက်တဲ့ နည်းပြယာဂင်ကလော့ပ် – Myan Ball
မက်ဆီကို လီဗာပူးလ်အသင်းအတွက် ခေါ်ယူရန် စိတ်ဝင်စားတယ်လို့ ဝန်ခံပြောကြားလိုက်တဲ့ နည်းပြယာဂင်ကလော့ပ်
လီဗာပူးလ်နည်းပြ ယာဂင်ကလော့ပ်က ဘာစီလိုနာ ကြယ်ပွင့် မက်ဆီကို လီဗာပူးလ်အသင်းအတွက် ခေါ်ယူပေးချင်ပေမယ့် ဘဏ္ဍာရေးအခြေအနေက လီဗာပူးလ်အသင်းကို အခွင့်အရေးမပေဘူးလို့ ဝန်ခံပြောကြားသွားခဲ့ပါတယ်။ မက်ဆီဟာ နှစ် ၂၀ နည်းပါး ကစားလာတဲ့ ဘာစီလိုနာအသင်းကနေ ထွက်ခွာခွင့်တောင်းဆိုထားတာဖြစ်ပါတယ်။
ဘာစီလိုနာအသင်းဟာ ဘိုင်ယန်မြူးနစ်အသင်းကို ချန်ပီယံလိဂ် ကွာတားဖိုင်နယ်မှာ (၈-၂) နဲ့ ရှုံးနိမ့်ခဲ့ပြီးနောက် အသင်းဟာ နည်းပြ ဆက်တီယန်ကို ထုတ်ပယ်လိုက်ပြီး ဆောက်သမ်တန် နဲ့ အဲဗာတန်နည်းပြဟောင်း ရော်နယ်ကိုးမန်းကို အစားထိုးခန့်အပ်လိုက်ပါတယ်။ ရော်နယ်ကိုးမန်းဟာ ဘာစီလိုနာအသင်းမှာ သူအတွက် အသုံးမဝင်တော့တဲ့ကစားသမားတွေကို ရှင်းထုတ်နေပေမယ့် မက်ဆီက ယခုလို အသင်းက ထွက်ခွာခွင့် တောင်းဆိုလိုက်တာ ဖြစ်ပါတယ်။
မက်ဆီဟာ ဒီနွေရာသီမှာ ပရီးမီးယားလိဂ်က မန်စီးတီးကို ရောက်ရန် ရေပန်းစားနေပြီး လီဗာပူးလ်နည်းပြကို အသင်းအတွက် ခေါ်ယူချင်သလားလို့ မေးမြန်းခဲ့ပါတယ်။“ခေါ်ချင်တာပေါ့ ၊ ဘယ်သူက သူ့အသင်းမှာ မက်ဆီကို မလိုချင်တဲ့သူ ရှိမလဲ? ဒါပေမယ့် အခွင့်အရေးမရှိပါဘူး။ ကိန်းဂဏန်းတွေက ကျွန်တော်တို့ အတွက် မဟုတ်ပါဘူး။ ဒါပေမယ့် အရမ်းကောင်းတဲ့ ကစားသမားပါ” လို့ အာဆင်နယ်အသင်းနဲ့ စနေနေ့ ဝင်ဘလေကွင်းမှာ ကစားမယ့် ကွန်မြူနတီ ဒိုင်း ဖလားပွဲမတိုင်မီ လီဗာပူးလ်နည်းပြ ယာဂင်ကလော့ပ် ဖြေကြားသွားခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။
မက္ဆီကို လီဗာပူးလ္အသင္းအတြက္ ေခၚယူရန္ စိတ္၀င္စားတယ္လို႔ ၀န္ခံေျပာၾကားလိုက္တဲ့ နည္းျပယာဂင္ကေလာ့ပ္
လီဗာပူးလ္နည္းျပ ယာဂင္ကေလာ့ပ္က ဘာစီလိုနာ ၾကယ္ပြင့္ မက္ဆီကို လီဗာပူးလ္အသင္းအတြက္ ေခၚယူေပးခ်င္ေပမယ့္ ဘ႑ာေရးအေျခအေနက လီဗာပူးလ္အသင္းကို အခြင့္အေရးမေပဘူးလို႔ ၀န္ခံေျပာၾကားသြားခဲ့ပါတယ္။ မက္ဆီဟာ ႏွစ္ ၂၀ နည္းပါး ကစားလာတဲ့ ဘာစီလိုနာအသင္းကေန ထြက္ခြာခြင့္ေတာင္းဆိုထားတာျဖစ္ပါတယ္။
ဘာစီလိုနာအသင္းဟာ ဘိုင္ယန္ျမဴးနစ္အသင္းကို ခ်န္ပီယံလိဂ္ ကြာတားဖိုင္နယ္မွာ (၈-၂) နဲ႔ ရႈံးနိမ့္ခဲ့ျပီးေနာက္ အသင္းဟာ နည္းျပ ဆက္တီယန္ကို ထုတ္ပယ္လိုက္ျပီး ေဆာက္သမ္တန္ နဲ႔ အဲဗာတန္နည္းျပေဟာင္း ေရာ္နယ္ကိုးမန္းကို အစားထိုးခန္႔အပ္လိုက္ပါတယ္။ ေရာ္နယ္ကိုးမန္းဟာ ဘာစီလိုနာအသင္းမွာ သူအတြက္ အသံုးမ၀င္ေတာ့တဲ့ကစားသမားေတြကို ရွင္းထုတ္ေနေပမယ့္ မက္ဆီက ယခုလို အသင္းက ထြက္ခြာခြင့္ ေတာင္းဆိုလိုက္တာ ျဖစ္ပါတယ္။
မက္ဆီဟာ ဒီေႏြရာသီမွာ ပရီးမီးယားလိဂ္က မန္စီးတီးကို ေရာက္ရန္ ေရပန္းစားေနျပီး လီဗာပူးလ္နည္းျပကို အသင္းအတြက္ ေခၚယူခ်င္သလားလို႔ ေမးျမန္းခ့ဲပါတယ္။“ေခၚခ်င္တာေပါ့ ၊ ဘယ္သူက သူ႔အသင္းမွာ မက္ဆီကို မလိုခ်င္တဲ့သူ ရွိမလဲ? ဒါေပမယ့္ အခြင့္အေရးမရွိပါဘူး။ ကိန္းဂဏန္းေတြက ကၽြန္ေတာ္တို႔ အတြက္ မဟုတ္ပါဘူး။ ဒါေပမယ့္ အရမး္ေကာင္းတဲ့ ကစားသမားပါ” လို႔ အာဆင္နယ္အသင္းနဲ႔ စေနေန႔ ၀င္ဘေလကြင္းမွာ ကစားမယ့္ ကြန္ျမဴနတီ ဒိုင္း ဖလားပြဲမတိုင္မီ လီဗာပူးလ္နည္းျပ ယာဂင္ကေလာ့ပ္ ေျဖၾကားသြားခဲ့တာျဖစ္ပါတယ္။
ဘာစီလိုနာနည်းပြ ရော်နယ်ကိုးမန်းရဲ့ ကမ်းလှမ်းချက်ကို ပယ်ချဖွယ်ရှိနေတဲ့ လီဗာပူးလ်ကွင်းလယ်လူ ဝိုင်နယ်လ်ဒမ်း
မက်ဆီ အတွက် အသင်းက အဓိက ကစားသမားတွေကို ပေးသွားမှာ မဟုတ်ဘူးလို့ ဆိုလိုက်တဲ့ မန်စီးတီး
အိုရီးယန့် အသင်းနဲ့ ကာရာဘောင်ဖလား ပွဲကို စပါးအသင်းမကန်ရပဲ နောက်တစ်ဆင့်တက်ရောက်ခွင့်ရ
စပိန်လာလီဂါ ပြိုင်ဘက် အက်သလက်တီကိုမက်ဒရစ်အသင်းဆီ အပြီးသတ်ပြောင်းရွှေ့သွားပြီဖြစ်တဲ့ ဘာစီလိုနာ တိုက်စစ်မှူးဟောင်း ဆွာရက်ဇ်
အာဆင်နယ်ကွင်းလယ်လူ တော်ရဲရားကို ခေါ်ယူနိုင်ရန် နီးစပ်နေတဲ့ အက်သလက်တီကိုမက်ဒရစ်အသင်း
အသင်းရဲ့ လက်ရှိ လူစာရင်းအနေအထားအရ အကယ်ဒမီ ကစားသမားတွေ လိုအပ်နေတယ်လို့ ဆိုလိုက်တဲ့ မန်စီးတီးနည်းပြ ဂွါဒီယိုလာ